Sigulda City Centre Holiday House - I-Airbnb
Sigulda City Centre Holiday House
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNormunds
Indlu yeholide enepatio yabucala ephakathi kumbindi weSigulda. Indlu yeendwendwe ikumgama wokuhamba ukusuka kwezona ndawo zidumileyo eSigulda. Endlwini uya kufumana yonke into oyifunayo ukwenza ukuhlala kwakho kube lula kangangoko kunokwenzeka.
IGauja National park yenye yezona ndawo zintle eLatvia. Yenza utyelelo lwakho eSigulda, okanye njengoko thina baselatvian sithanda ukuyibiza - "ISwitzerland yaseLatvia" -, ngakumbi kunandipheka, ngokuhlala kwiSigulda City Centre Holiday House.
Yaqalwa njengeshishini losapho, iSigulda City Centre Holiday House yindlu encinci yeendwendwe ezi-2 kumbindi weSigulda. Le ndlu inegumbi lokuhlala eliphangaleleyo elidityaniswe nekhitshi, igumbi lokulala langoku elinebhedi enkulu ephindwe kabini, kwaye, ngokuqinisekileyo, igumbi lokuhlambela elinye. Kuyenzeka ukuguqula isingqengqelo kwigumbi lokuhlala ebhedini kabini ngokunjalo. Apha uya kukwazi ukufumana yonke into oyifunayo ngelixa undwendwela - izixhobo zasekhitshini, i-cutlery, izitya, i-dishwasher, inkqubo yokufudumeza ngombane, i-TV, irediyo, indawo yemoto yakho kwindawo evaliweyo, kunye ne-WiFi. Unokutshintsha iqondo lokushisa endlwini ngokwakho, ukuze uzive ukhululekile ngokusemandleni.
Ukwenza utyelelo lwakho lube mnandi ngakumbi indlu inegadi yabucala enocingo, apho uya kukwazi ukonwabela isidlo sakusasa, ikomityi yekofu / iti okanye ube nepikiniki kunye nokutshiswa lilanga. Uya kuba nakho ukufikelela kwi-grill, ukuze ube ne-BBQ, ". Igadi inecanopy encinci enezitulo kunye netafile, apho unokuchitha khona iingokuhlwa ezifudumeleyo zasehlotyeni ngaphandle. Kukho itrampoline kwiyadi yethu yabantwana.
Sifumaneka kwimizuzu eyi-10 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye nesikhululo sebhasi, imarike yeSiguldas, apho kusasa uya kuba nakho ukuthenga iimveliso ezitsha, iivenkile zokutya kunye nezinto ezininzi ezithandwa ngabakhenkethi zibekwe kumgama omfutshane wokuhamba.
Iibhayisekile ezi-3 ezifumanekayo ukuba zirente!
Indlu yethu yeendwendwe ikwindawo ezolileyo nenoxolo, kodwa isembindini weSigulda entle. Ukuhlala apha uya kukwazi ukonwabela urhatya olunoxolo, kodwa kwangaxeshanye ukuba ufuna ukuphuma uyekwenza into eyonwabisayo akuyi kufuneka ukhwele iibhasi ezingenakubalwa ukuya kumbindi wesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Normunds
Ukuba uya kufuna naluphi na uncedo, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukukunceda. Siza kwabelana ngolwazi lwethu lwenkcubeko yendawo kunye namathuba okubona indawo eSigulda. Ukuba kuyimfuneko siya kukunceda ukuba ubhukishe nayiphi na imisebenzi.
Ukuba uya kufuna naluphi na uncedo, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukukunceda. Siza kwabelana ngolwazi lwethu lwenkcubeko yendawo kunye namathuba okubona indawo eSigulda. Uku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sigulda